Eurona yatove pasi peyuro imwe | Ehupfumi Zvemari
Eurona yatove pasi peyuro imwe
Eurona Wireless Telecom (EWT), ikambani yekuSpanish yemarudzi mazhinji yekufambiswa kwemashoko inopa iyo chizvarwa chitsva Broadband kuwana masevhisi, uye inounza inomhanya-mhanya Internet uko vamwe vasinga svike, vachishandisa wireless matekinoroji uye satellite. Iwo epasi rese, ayo akanyorwa pane iyo Imwe nzira Stock Market (MAB) kubvira 2010, ndeimwe yekuodza mwoyo kukuru kune vanoisa mari nekuti mumakore mashoma yakabva pakutengesa 4 euros mugove kusvika ku0,80 parizvino. Semhedzisiro yechiito ichi mumisika yemasheya, hapana mubvunzo kuti vagovana vayo vakarasikirwa nemari yakawanda munguva ino.
Icho chokwadi chekuti zvikamu zveEurona zvatova pazasi peyuniti yunivhesiti zviri kuwedzera iyo kutengesa kumanikidza nezve zviito zvavo. Iyo inhamba yakanaka yemakambani madiki nepakati ari kuvhara nzvimbo muichi kukosha mukati memakore matatu apfuura. Kunyangwe vaine hurema hwakasimba muzvigaro zvavo sezvo vachitya kuti zvinhu zvinogona kuwedzera kubva nhasi zvichienda mberi. Kusvika pakuti iyo ndeimwe yemitengo yemari yakadonha zvakanyanya munguva dzichangopfuura. Nekupunzika mumutengo wayo padyo ne90%, chimwe chinhu chisina kujairika pakati pehunhu hwenyika.
Kune rimwe divi, apo zvikamu zveEurona zvaitengesa pamusoro pe2 euros, zvaive zvichikwanisika kwazvo kuti inogona kusvika pamatanho padyo padyo neayo ese-enguva kukwirisa. Mune toni pamana euros uye izvo kune vazhinji vemusika masheya vaongorori yaive yavo yakatarwa mutengo. Ikozvino zvaonekwa kuti nzira iyi yanga isiri yechokwadi uye zvakaitika kuti zvishoma nezvishoma zvikamu zvavo zvave kurasikirwa nemutengo mumisika yemari. Kusvikira pakuti kune vatove vatengesi vazhinji vasingavimbi nekadhi kadiki iri mune yakatarwa uye yatove refu downtrend.
1 Eurona: vimbisa zvikwereti
2 Ivo vanotarisira kuzadzisa zvinangwa zvavo
3 Zvikamu zvako zvakachipa here?
4 Njodzi yekudzamisa kuwira kwako
5 Matipi ekutengesa neEurona
Eurona: vimbisa zvikwereti
Kutya varidzi vayo voga, musangano wayo wevashandi wakaitwa mavhiki mashoma apfuura umo chibvumirano chekupa kukwana kwakaringana uye inovimbisa kukura kwakasimba kweboka mumakore mana anotevera. Asi chokwadi ichi hachina kuburitsa chero chinjo pane shanduko yemutengo wayo mumisika. Kana zvisiri zvakapesana chaizvo, yakaramba ichidonha nesimba guru uye isina kana kumwe kudzorera kwekufunga kupi. Chinhu chinotyisa vanoongorora zvemari avo mune ese makesi vanokurudzira kusiya zvigaro mukambani nyowani yehunyanzvi.
Eya, musangano unoshamisa uyu, uyo waunza pamwechete vagovana pamwe ne53,79% yemugove capital nekodzero dzekuvhota, yakabvumidza zvinhu zvese zviri muhurongwa. chikwereti chakakanganiswa nekugadzirisa zvakare ichave iri pasi pemukuru-wemakore mashanu mukuru uye kufarira kumirira kubva padanho rekukura. Zvino zvichave zvakafanira kuti uongorore kana muterevhizheni opareta achizadzisa zvinangwa zvake munguva pfupi kana yepakati uye kumwe kudzoreredza kunogona kutanga nemitengo maererano neino nguva.
Ivo vanotarisira kuzadzisa zvinangwa zvavo
Nezve musangano uyu wevashandi veEurona, zvinoitika kuti CEO weEurona, Fernando Ojeda, akaedza dzikamisa misika yemari. Nokuratidza kuti "kufambira mberi kwehurongwa uku kuchave kiyi pakufambira mberi kweEBITDA, iyo yatinovimba kuti ichasvika 20,2 mamirioni euros muna 2022 semhedzisiro yekuvandudzwa kwemahara, kukwirisa kwemitengo yedu yepamusoro uye kuitwa kwekuvandudza". Parizvino, misika haisati yanyatsoteerera iye uye zvikamu zvake zvinoramba zvichidonha zvine simba uye pasina sarudzo dzekupora, zvirinani munguva pfupi.
Kubva pane ino mamiriro ese, veSpanish telecommunications multinational yakavhura chikuva chekusimudzira kweesoftware application, iyo inobvumidza iyo Tourism uye chitoro chikamu unganidza dhata pane zvakasarudzika zvevatengi vayo uye uvandudze ruzivo rwekutenga nehurongwa hwekurudziro yakanangana nehunhu hwavo hwemagariro evanhu uye zvavanofarira zvekutenga. Icho chiri, chero zvazviri, nzira nyowani yekutengesa yekuyedza iyo kambani inogona kuchinja, zvirinani kubva pamusika wekutengesa maonero. Chinhu chinosara kuti chionekwe, sekureva kwevamwe vanoongorora vanoongorora emisika yemari.
Zvikamu zvako zvakachipa here?
Tichifunga nezvemitengo yakaderera yezvikamu zveEurona, zvakajairika kuti varimi vazvibvunze kana mitengo yavo iri yakachipa. Nechishuwo chikuru chekutora mukana wemitengo iyi uye kuita kuti mari yako ibatsire mune isina kunyanyisa nguva yakareba. Kunyangwe zvichidikanwa kuve neiyo iyo mbiri iyo iyo varairidzi veiyi kambani yakanyorwa vanga vaine zvave zviri zvekufungidzira zvakajeka. Nechishuwo chekuita zvinzvimbo zvavo munzvimbo shoma muzvikamu zvekutengeserana. Asi zvinosuwisa kwavari, ivo vakasangana nemhedzisiro. Icho hapana chimwe kunze kwezviito zvako havana kumira kudzika kubvira 2014. Mune mamwe mazwi, makore mana haisi mamiriro ezvinhu akanaka kune ako zvaunofarira mune yekudyara chikamu.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kusvika dzosera mwero wema euro maviri pachiyero hachizove chakapa chiratidzo chakajeka kuti chakaipisisa chapfuura. Uye iyi iri nhanho mumitengo yayo iyo parizvino iri kure kwazvo, nekuti zvaisazofanira kuwana chero zvishoma pasi peinopfuura imwe euro mumutengo wayo. Chinhu chisinga fungidzike kuti chiitike mugore rinotevera. Kunyangwe paine tariro tariro mamaneja ayo. Chero zvazvingaitika, ichokwadi kuti makambani madiki nepakati-epakati ayo achiri akamisikidzwa mukukosha anofanirwa kujaira.
Njodzi yekudzamisa kuwira kwako
Pane kupesana, mamiriro acho haana kusimba panguva ino uye kune njodzi chaiyo yekuti zviito zvavo zvinogona kuenderera. kurasikirwa nekuwedzera kukosha pamusoro pemwedzi mishoma inotevera. Ehezve, mamiriro ezvinhu aripo uye varimi vanofanirwa kuyiongorora nenzira kwayo kuti vagadzire chero mhando rehurongwa hwekudyara. Sarudzo yakaoma kunzwisisa yekuita nekuda kwehunhu hwakakosha hunounzwa nemazuva ano ekutengesa. Hazvishamisi kuti zvinogona kuwedzera kuipa mumwedzi iri kuuya, sevazhinji vanoongorora zvemari vachitengesa.
Dai izvi zvaive nenzira iyi, hapana mubvunzo kuti zvinogona kunge zviine njodzi kune vashoma nepakati varimi. Nenjodzi yekurasikirwa nechikamu chakakosha kwazvo chemari yakachengetwa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei uchifanira kuve akangwara neiyi kukosha yakakosha. Izvo zvinongoshanda mukufungidzira mashandiro uye chero mushandisi aine nhanho yepamusoro yekudzidza mukirasi iyi yemitengo. Hazvishamisi kuti zvinogona kutaurwa kuti ane zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Uye saka hazvisi izvo zvinorehwa nemubhadharo unoreva, kunyangwe makore mashoma apfuura masheya awo aitengesa pamatanho e4 euros.
Matipi ekutengesa neEurona
Kana, kunyangwe paine zvese, sarudzo yako ndeyekuisa chikamu chemari yako mune ino kambani yekuSpanish yekufona inopa mabhenefiti ekuwana masevhisi. Kwete chete kuti mashandiro abatsire, asi kukupa iwe zvivimbiso zvakakura mune chero zano rekudyara. Uye pakati pazvo zvinotevera zvinoratidzira kuti tinokufumura pazasi:
Dzosera chikamu chemari yako chaunenge usina kuita ine njodzi yeichi chiitiko chakaomarara mumusika wemasheya uye izvo zvinogona kuita kuti urasikirwe nemari yakawandisa kupfuura iwe zvaunofunga kubva pakutanga.
Iwe unofanirwa kuremekedza nzvimbo dzekupinda kuti ugare yakasungirirwa paukoshi. Sezvo mune zvese zvingangodaro zvinokubhadhara iwe zvakanyanya kuti mitengo isvike padanho rakagadzirwa mukutenga kwako. Sezvazvakaitika kune vazhinji vashoma uye vepakati varimari mumakore apfuura.
Usaronge mafambiro mukati nepakati nepakareba nekuti mukupedzisira basa iri rinobhadhara zvakanyanya. Zano rako rinofanirwa kuve rakanangana nekuzadzisa capital seku nekukurumidza sezvinobvira uye pasina kuteerera kune mamwe maitiro muinvestment. Iyi sisitimu yakanyanya kusiiwa kune mamwe maitiro eiyo maSpanish equities
Iwe haugone kukanganwa kuti iyi Spanish telecommunication kambani ndeimwe yeavo ari mune bearish chiteshi. Uye zvechokwadi izvo zvakaoma kwazvo kuwana chero mhando mabhenefiti. Kana zvisiri izvo zvinopesana, sezvaungaona mukushanduka kwemitengo yavo mumusika wemasheya.
Kukwezva kwayo kwakanyanya yakavakirwa pane zvinotarisirwa iri kugadzira iyi yakanyorwa kambani uye kwete mune zvebhizinesi mhedzisiro iyo yairi kupa kusvika zvino. Chero bedzi simba iri risingashanduke, zvichave zvirinani kana iwe ukasazobva pakutora zvinzvimbo mariri. Chokwadi yako pachako accounting ichatenda iwe chaizvo munguva pfupi.
Funga nezvekuti mune zviyero zvemunyika zviriko yakawanda tsika sekuita chero mhando yemari. Kubva nemaonero aya, hazviite zvine musoro kutarisa mashandiro nemutengo wakanyorwa. Nekuti iwe unogona kusarudza chero mhando chengetedzo mumusika unoenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Eurona yatove pasi peyuro imwe
Chii chinonzi kudzorera uye kukanda?